Abenzi bekhofi abaconsayo abahle futhi abasebenzisekayo | Bezzia
Abenzi bekhofi abaconsayo abahle futhi abasebenzisekayo
UMaria vazquez | 06/04/2021 12:00 | Ukupheka
Ukulungiselela ikhofi kwabaningi bethu kuyisiko lapho umzuzu wokuzijabulisa nokuzola uqala phakathi naphakathi kwasekuseni noma ntambama. Ukwenza kanjalo sinezinye izindlela eziningi, okungukuthi abenzi bekhofi abadonsa ngesandla ukuthi namhlanje siphakamisa okungcono kakhulu ukufeza ikhofi elibucayi kepha linokunambitheka okuningi.
Kuhle, kuyasebenza futhi akunantambo, Yile ndlela abenzi bekhofi abaconsa ngayo ukuthi siphakamisa namhlanje eBezzia. Zonke zinesihlungi lapho kufakwa khona ikhofi lomhlabathi nalapho kuthelwa khona amanzi ashisayo ngesandla kepha ngemibala ehlukene yokufaka ikhofi. Melitta, Chemex noma Hario, ukhetha!
Sekungamakhulu eminyaka ikhofi lilungiswa ngokushisa ikhofi lomhlabathi ebhodweni lamanzi. Futhi yile mishini yekhofi egcina ngandlela thile leyo ngqangi kepha ithuthukisa ukunambitheka kokugcina kwekhofi. Kulula ukuyisebenzisa, banayo futhi izinzuzo eziningi kunezinye izinhlobo zekhofi:
Bathatha isikhala esincane ekhishini.
Zilula futhi zihamba kalula.
Bahle. Zibukeka kahle ku ekhishini countertop.
Ukusebenza kwayo kulula
Ukulula kwayo kwenza ukuqina kwayo kuphakame.
4 Indlela yokwenza ikhofi
Ubuwazi ukuthi ngumsunguli weMelitta owasungula ukuhlunga ikhofi ngo-1908? Kamuva, ngama-30s UMelitta Bentz wethule izihlungi eziyindilinga lokho kuthuthukise ikhwalithi yekhofi ngokukhiqiza indawo enkulu yokukhishwa kwayo. Izihlungi esizaziyo namuhla futhi eseziphenduke uphawu lwenkampani.
Uzothola kukhathalogi yaseMelitta ipulasitiki, ingilazi kanye ne-porcelain filter filter ngemifula emisha eqinisekisa ukukhishwa kwekhofi okulinganiselayo. Ngaphezu kwalokho, ukuvuleka kwayo okubili kuzokuvumela ukuthi wabelane ngenjabulo yokuphuza ikhofi, ngoba ungalungisa amabili ngasikhathi sinye. Futhi ngeke kukubize ngaphezu kwe- € 17.
Ama-portafilters ahlanganiswe ne-carafe yengilazi ye-Melitta Pour Over asakuvumela nanamuhla phisa ikhofi ngendlela elula nenhle kubantu abaningi. I-carafe yenziwa ngengilazi ye-borosilicate futhi ingasetshenziswa ngeziphuzo ezishisayo noma ezibandayo ngaphandle kwengozi yokwephuka. Ifanele i-microwave futhi ngenxa yesivalo sayo esikhiphekayo ingagezwa kalula kumshini wokuwasha izitsha.
Isigubhu sengilazi i-Chemex sakhiwa ngusokhemisi waseJalimane uPeter Schlumbohm ngo-1941. Idizayini yayo ehlanzekile futhi elula Kwenza kubukeke kukuhle ngaphezulu kwanoma iyiphi i-countertop. Imodeli enesibambo sokhuni iyamangaza, futhi inikezela ngemfudumalo kumklamo, izokuvimbela ekushiseni lapho uphethe ingilazi eshisayo.
Abenzi bekhofi abaphathwa ngesandla bayatholakala ngosayizi abahlukene ukuphuza izinkomishi ezintathu kuya kweziyishumi nantathu. Futhi ukwakheka kwezihlungi zayo ze-fiber kukhethekile, mkhulu kunomncintiswano ukugcina izinto ezibabayo, uwoyela nezinhlamvu ngaphandle kwenkomishi yakho.
IHario yasungulwa eTokyo ngo-1921 futhi ekuqaleni yakhiqiza imikhiqizo yengilazi yama laboratories amakhemikhali. Idivayisi yakho ethandwa kakhulu ye-V60, Yenzelwe ukuthuthukisa ama-portafilters ayekhona ngaleso sikhathi. Nge-engela engu-60º, amanzi agelezela aye maphakathi nokugaya, enwebe isikhathi soxhumana naye.
Le kharafini nesigaxa kusethiwe ukwenza ikhofi elihlungiwe lilungile ukuze, ngentengo engabizi (€ 25), ungathola okudingayo ukwenza ikhofi yokuhlunga efanele ekhaya. Ukufeza lokhu, kufanele ulandele imiyalo yenkampani.
Indlela yokwenza ikhofi
Noma yimuphi umenzi wekhofi oconsa mathupha owukhethayo, indlela yokulungisa ikhofi izofana kakhulu kuhluka kuphela isilinganiso sekhofi namanzi adingekayo ukuthola imiphumela emihle kakhulu. Ukuthambisa isihlungi ngamanzi ashisayo, ukukala ikhofi lomhlabathi lokusanhlamvu okuphakathi bese ulisabalalisa ngokulinganayo kusihlungi yizinyathelo zokuqala okufanele zilandelwe.
Ngemuva kwalokho kufanele ushise amanzi bese uwathela kujeke we-gooseneck. Kungani? ngoba ngalokhu kuzoba lula kuwe ukwengeza amanzi ashisayo ngaphezulu kwekhofi ngokunyakaza okuyindilinga kusuka maphakathi kuya ngaphandle. Ukushisa kwamanzi nakho kuzobaluleka; Kufanele kube phakathi kuka-90 no-94 degrees. Uma ungenayo i-thermometer, kuzokwanela wena ukunyathela cishe imizuzwana engama-40 ngemuva kokuthi ibile.
Kunamavidiyo amaningi ku-YouTube anamathiphu asebenzisekayo wokusebenzisa labenzi bekhofi abadonsa ngesandla, bahlole!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Abenzi bekhofi abaconsayo abahle futhi abasebenzisekayo
Isizathu sempumelelo yochungechunge oluthi 'Ginny and Georgia' on Netflix
I-Tofu ne-cauliflower curry nelayisi